Iindaba - Umzantsi Melika (eBrazil) Izithako zokutya zamanye amazwe bonisa i-2019
Umzantsi Melika (eBrazil) Izithako zokutya zamanye amazwe bonisa i-2019
I-Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd iye kwiZithako zokutya eMzantsi Melika 2019 ukusukela nge-20-22 Agasti ngo-2019 eSao Paulo, eBrazil. Njengenye yeemarike ezintsha kuthi, sithumele ikarragee yethu kubathengi boMzantsi Melika, abazinikeleyo kwimveliso yenyama neyeemveliso zobisi. Sihambise i-agar yethu ngokuthe chu kule Brazil nase Argentina ngokunjalo.
Ixesha leMiboniso: Agasti 20-22, 2019
Indawo yomboniso: Sao Paulo, Brazil
Booth inombolo: 2-7-79
Imveliso yomboniso: Agar Agar; ICarrageenan
Umjikelo womboniso: kanye ngonyaka
Intshayelelo kulo Mboniso:
UMzantsi Melika Izithako zokutya kunye noMboniso weTekhnoloji (Fi E Hi 2019) waququzelelwa yi-CMP Business Media e-Expo Centre eMantla eSao Paulo, eBrazil Njengomboniso onegunya nowobungcali kushishino lokutya eMzantsi Melika, Fi eMzantsi Melika nase Hi Mzantsi Melika. I-Fi ne-Hi zidityanisiwe, umsitho uza kukhatshwa yi-CPHI SOUTH AMERICA, UMZANTSI WOMZANTSI Merika American Pharmaceutical Raw Materials Fair. Umboniso yenye yezona zinto zivelisa imveliso enkulu eLatin America kwaye izakubanjwa kwangaxeshanye. kunye nendawo njenge-FISA, i-2015 South American International Ingredients Show eBrazil.
Ukugubungela indawo engaphezulu kwe-20,000 yeemitha zesikwere, iBrazil Ingredients Show ye-2018 itsale iindwendwe eziyi-11,255, kwaye ngaphezulu kwe-500 iimveliso zokutya bezikhona ukukhuthaza iimveliso zabo ezintsha kunye neetekhnoloji. 83% yamashishini athabatha inxaxheba aqinisekisile umphumo womboniso, bekholelwa ekubeni lo mboniso uhlangabezene nolindelo lwabo lokuthatha inxaxheba kwaye bazuze iziphumo ezanelisayo. I-94% yamashishini akholelwa ukuba umboniso ubenza bakwazi ukugcina abathengi babo bangoku, ukuphuhlisa amatyeli alishumi, kunye nokomeleza ukuqondwa kwegama labo, okwenza ukuba ibe yindlela elungileyo yokukhuthaza amashishini.